सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? – BUSINESSPANA.COM
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं- सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्ष बैंकले ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । बैंकको खुद नाफा गत वर्षको तुलनामा १८.६५ प्रतिशतले कम हो । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तिय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
गत वर्ष १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको बैंकको यो त्रैमासमा घटेर १६ करोड ५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि ७ करोड २८ लाख रुपैयाँबाट घटेर ६ करोड ६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । चैत मसान्तसम्म ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले ३ अर्ब ८६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।
हाल यसको चुक्ता पुँजी ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने रिजर्भ कोषमा ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा पनि १.६५ प्रतिशतले बढेर २.८५ प्रतिशत भएको छ । प्रतिशेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ ११८ रुपैयाँ २६ पैसा छ ।
Previous: हुन्डाइले शुरु ग¥यो आफ्ना ग्राहकका लागि ‘हटलाइन सेवा’
Next: दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख १८ गते शनिबारको राशिफल